Gasi muKitsi: Zvinokonzera uye Mhinduro | Noti Katsi
Gasi mukatsi: zvinokonzera uye mhinduro
Maria Jose Roldan | | Zvirwere, Tricks
ari gasi mumakati Kazhinji idambudziko ratisingape kukosha kwariri kusvikira vatanga kunhuwa zvakanyanya. Iwo anowanzo ari echisikigo chikamu chegadziriro yekugaya, asi kana zvimwe zviratidzo zvikaitika, hutano hwehuya hungangotanga kuda kutarisirwa.
Ngatione ndezvipi zvikonzero, zviratidzo uye mhinduro dzemagasi mukitsi.
1 Zvinokonzera gasi mumakati
2 Gasi zviratidzo mumakati
3 Mishonga yekumba yegesi mumakati
3.1 Dzivisa kupa dairy
3.2 Mupe kudya kwakaderera mune fiber uye zviyo
4 Mimwe mishonga yekurapa gasi mumakati
5 Icho chinetso chehutano here?
6 Kuenda kun'anga nguvai?
Zvinokonzera gasi mumakati
Magasi mazhinji anouya kubva mukudyiwa nemhepo, saka chimwe chezvikonzero zvikuru ndechekuti katsi idya nekukurumidza zvikurukungave nekuti anokwikwidzana neimwe katsi kuitora kana kuitirwa kushungurudzika (rumwe ruzivo pano). Chimwe chikonzero ndechekuti iwe wakatanga kudya uchangomhanya uye kurovedza muviri kwechinguva. Asi handizvo chete zvikonzero.
Kudya kwakanyanya gorosi, chibage kana zvigadzirwa zvinogona kukonzera kuwandisa gasi. Panyaya iyi, zvinofanirwa kutaurwa kuti katsi idya nyama, uye gadziriro yako yekugaya haigone kugaya chikafu ichi zvakanaka. Zvakare, kana vakapihwa mukaka kana zvigadzirwa zvemukaka, vanogona zvakare kupedzisa kupfuura gasi. Uye, nenzira, iwe unofanirwa kudzivirira kuswedera padyo nemarara, nekuti inogona kudya chikafu chakaipa uye kukuita kuti unzwe wakashata. Unofanirawo kuikwesha zuva nezuva, zvikasadaro waizoisa njodzi yekuumba kwayo mvere dzemvere, uye semhedzisiro, iwe unogona kuve negasi.
ari ura utachiona and the zvirwere zvemudumbu vanogona zvakare kuve chikonzero chekati vane dambudziko iri.
Gasi zviratidzo mumakati
99% yematumbo gasi haina hwema, saka kuziva kana kati yedu iine matambudziko ekugaya hazvisi nyore nguva dzose. Asi usazvidya moyo, Heino rondedzero yezviratidzo zvinowanzoitika:
Mheremhere mudumbu remudumbu
Mishonga yekumba yegesi mumakati
Kana gasi rekatsi yako rave dambudziko, uye kunyanya kana iwe uchifungidzira kuti ane chirwere, iwe unofanirwa enda naye kuna chiremba kuti iwe uongorore. Asi kumba iwe unogona zvakare kuita zvinhu zvinoverengeka, senge zvinotevera.
Dzivisa kupa dairy
Mukaka wemombe une lactose, inova shuga iyo katsi isingakwanise kugaya nekuti haigadzire enzyme inodiwa, lactase. Ipa mukaka uye zvimwe zvigadzirwa zvemukaka zvemhuka zvakatangira zvinofanirwa kudzivirirwa, kunze kweavo vasina lactose.
Mupe kudya kwakaderera mune fiber uye zviyo
Zvizhinji zvekudya zvekatsi zvine fiber yakawanda uye zviyo, izvo kunyangwe zviri manyuko epuroteni, mhuka idzi hadzigone kuzvigaya zvakanaka. Kuchengetedza katsi yako kuwana gasi, Zvinokurudzirwa kumupa chikafu chakazara mumapuroteni emhuka uye varombo muzviyo uye zvigadzirwa.
Mimwe mishonga yekurapa gasi mumakati
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro apa, isu tichaenda kukuudza nezvemimwe mishonga yakanakira iwe kuti uzive ... nenzira iyi iwe uchazoziva kubatsira katsi yako kuti isatambura negasi (nekuti inogona kurwadza kwazvo mune dzimwe nguva ).
Kune rimwe divi, izano rakanaka kunyora pasi zvinodyiwa nekatsi yako mukati memaawa makumi maviri nemana nechinangwa chekukwanisa kuita yakanaka yekutevera uye nekudaro uwane kuti ndezvipi zvekudya zvinogona kunge zvichikonzera aya magasi.
Uyezve, kuti ubatsire kati yako kubvisa aya magesi, izano rakanaka kuti iwe utarise zvinotevera:
Chinja chikafu chako nguva dzose kune chakaderera mufayibha uye uve nezvikafu zvinogaya nyore. Veti yako inogona kukurudzira zvakanakira wako feline.
Dyisa kati yako zvidiki zvidiki asi kazhinji masikati.
Kana uine anopfuura katsi imwe pamba, saka uchafanira kuvapa zvekudya zvakasiyana kuvadzivirira kubva pakurwira chikafu.
Dzivirira katsi yako kubva pakudya chikafu chakaora (semuenzaniso, iyo iri mumarara).
Iwe unofanirwa kuve nechokwadi icho katsi yako kurovedza nguva dzose.
Kana iwe uchifunga kuti magasi akawandisa mune yako feline, saka uchafanirwa kutaura nachiremba wako kukuyambira pamushonga unokodzera katsi uye izvo zvinogona kukubatsira iwe kudzinga gasi zvirinani.
Kune mamwe mhinduro kumatambudziko egesi mukitsi, semuenzaniso:
Pancreatic enzyme inowedzera
Usambofa wakapa kati yako chero gasi mushonga kana mhinduro usati watanga kuikurukura nachiremba wako., kunyangwe iwe uchifunga kuti iwo chaiwo mishonga uye kuti haizokuvadze iwe. Nyanzvi ichafanirwa kuongorora akawanda akakosha zvinhu senge rudzi, zera kana huremu hwechipfuwo chako.
Icho chinetso chehutano here?
Kune vazhinji vane katsi vane gasi, vanonetseka zvakanyanya nekuti vanofunga kuti zvinonetsa gasi inogona kunge iri dambudziko rakakomba rehutano. Chaizvoizvo, kuve nemhepo inongoitika yega haifanirwe kuve chinhu chakashata, asi kana zvanyanyisa ungazoda kurapwa nekuti rava kuita dambudziko rakakomba kupfuura kufunga kwekutanga. Mamwe ematambudziko aungave uchitambura nawo ari.
Chirwere chekuputira ura
Utachiona (mamwe mashoko)
Chero zvazvingaitika, kana iwe uchifunga kuti katsi yako inogona kunge ichirwara nechirwere chipi zvacho, angave ambotaurwa kana vamwe, zvakakosha kuti uende kuna chiremba wemhuka kuti unonoita bvunzo dzakakodzera. Nenzira iyi, iwe unozogona kuziva chaizvo zviri kuitika kukati yako uye nekudaro uwane kurapwa kunoenderana naye.
Kuenda kun'anga nguvai?
Sezvatakakuudza pamusoro, zvakakosha kuenda kuna chiremba pese paunofunga kuti katsi yako ine imwe mhando yechirwere, asi chero zvakadaro, zvakakosha kuti uone nyanzvi mune ma gasi uye zvimwe zvezviratidzo izvi, nekuti zvinogona kuratidza dambudziko rakakura rehutano
Ane marwadzo mudumbu paunomubata
Ane dumbu rakazvimba
Haana kuita manyoka
Iwe une ropa muzvigaro zvako
Pakupedzisira, uye senzira yekudzivirira, zvakakosha kuti iwe utarise kune uko chipfuwo chako chinowana chikafu. Semuenzaniso, kumba, gara uchivhara zvakachengeteka gaba remarara uye usarega chipfuwo chako chichifamba-famba kana kuenda kumatunhu evavakidzani, kana kumubvumidza kuti atenderere kunzvimbo dzinochengeterwa marara.
Zvakare, kana chipfuwo chako chikadya mutsvina (zvese zvake neizvo zveimwe mhuka) nekuti ane kushomeka kwehutano mukudya kwake, uchafanirwa kugadzirisa uye kutaura nachiremba nezve zviri kuitika.
Gasi mukitsi rinogona kunge riri dambudziko risinganetsi, asi nehunyanzvi uhu uchakwanisa kuzvigadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Zvirwere » Gasi mukatsi: zvinokonzera uye mhinduro
Lissette Ivonne Castillo Zambrano akadaro
Mboro yangu ine dumbu rizere nemweya asi haidye uye yakaonda uye yakadzika, iyo yandinogona kumupa kuti ibudise nekuti inonzwika sedhiramu
Pindura Lissette ivonne castillo zambrano
Ndine urombo kuti katsi yako yakaipa, asi handikwanise kukubatsira nekuti ini handisi chiremba wemhuka.
Ndinokurudzira kuti uendese kune nyanzvi.
Kitsi yangu ine mazuva gumi ekuberekwa, amai vake vakamusiya, ndiri kumurera, asi mukaka wese unozvimba dumbu uye ane yakawanda colic uye gasi, chii chandingaite?
Ndinokurudzira kuti uende naye kuna chiremba (ini handisi).
Unogona kunge uinewo makonye. Pazera iri vari panjodzi huru.
Nzira yekuwanazve sei chivimbo chekati?
Ndezvipi zviratidzo uye kurapwa kwejaundice mumakati?